> Resource> Igwefoto> Olee naghachi Photos si Leica Igwefoto
Enwere m ike Naghachi Photos si Leica igwefoto?
Ezigbo nchịkọta akụkọ, m wee were ọtụtụ ndị mara mma photos n'oge m njem Paris na m Leica M igwefoto dijitalụ. Mgbe m rutere n'ụlọ m chọrọ nyefee foto kọmputa m. Mgbe ahụ nsogbu bịara. Ahụghị m foto niile na kọmputa na ha agaghịkwa adị na igwefoto m kwa. M n'aka na m ehichapụ ha. Ya mere, nwere ike onye na-agwa m otú m nwere ike ịhụ foto m azụ? Biko na-atụ aro. Daalụ nke ukwuu.
Ị photos na-efu n'ihi usoro njehie. Foto gị igwefoto nwere ike ga-efu n'ihi ihe ndị ọzọ dị ka nhichapụ, formatting ma ọ bụ nje agha. N'ezie, foto ndị ka na gị Leica igwefoto. Dị ka ogologo oge ha na-agaghị overwritten site ọhụrụ data, gị nwere ike omume weghachite ha na a Leica igwefoto foto mgbake usoro. Ya mere, ihe kasị mkpa na ị chọrọ ime na-agbake foto site na Leica igwefoto bụ ịkwụsị iji igwefoto ọzọ.
Mgbe ahụ, ị nwere ike iji Wondershare Photo Recovery ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac iru ihe mgbaru ọsọ gị. Nke a ngwa bụ ike kacha ike na trustful ngwá ọrụ na-enyere gị aka naghachi furu efu, ehichapụ, ma ọ bụ merụọ foto site na Leica igwefoto. E wezụga na, a usoro bụ ike iji weghachi ndị ọzọ faịlụ dị ka vidiyo na audios si gị Leica igwefoto kwa.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke usoro ihe omume na-agbake ehichapụ foto site na Leica igwefoto ugbu a!
Naghachi Photos si Leica Igwefoto na 3 Nzọụkwụ
Nke a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ Leica igwefoto foto mgbake ndu-okokụre na Windows version nke Wondershare Photo Recovery. Ọ bụrụ na ị nwere Mac ngwaọrụ, ndị nduzi adabara kwa.
Nzọụkwụ 1 Wụnye usoro ihe omume na kọmputa gị na-agba ya, ị ga-enweta ihe interface dị ka oyiyi n'okpuru. Ị dị nnọọ mkpa pịa "Malite" na-amalite.
Cheta na: Biko mee n'aka na gị Leica igwefoto ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa na-ọma-ejikọrọ na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 All dị draịva / partitions na kọmputa gị ga-achọpụtara na gosiri na window. Ị nwere ike họrọ otu maka gị Leica igwefoto na pịa "iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu furu efu photos na ya.
Nzọụkwụ 3 Mgbe scanning dị n'elu, ị nwere ike naghachi foto site na Leica igwefoto ugbu a. Ị ga-enwe ike ihuchalu niile hụrụ photos ke window, ka ego olee otú ọtụtụ n'ime photos nwere ike Ewepụtara si gị Leica igwefoto.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ photos ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" bọtịnụ họrọ otu folda na kọmputa gị na-azọpụta ha.
Rịba ama: Ị nwere ike na-natara oyiyi azụ gị Leica igwefoto zere data overwritten.
Ọ bụla Way naghachi Photos si Nikon Igwefoto
Sony Photo Recovery: Naghachi Photos si Sony ese foto
Olee otú Idozi iPhone Igwefoto Roll Crash na Photo Loss
Olee otú Naghachi Data si Digital ese foto